Librewolf na Librefox: Ndị ọzọ nọ na Firefox gafere Waterfox | Site na Linux
Librewolf na Librefox: Nhọrọ ndị ọzọ na Firefox gafere Waterfox
Linux Post Wụnye | | Aplicaciones, Na-atụ aro
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị kwuru banyere ya Mmiri Firefox na-ewere ohere nke mwepụta nke ọhụụ ya 2020.08 mbipute. Agbanyeghị, n'agbanyeghị atụmatụ ya na arụmọrụ ya, ya njikọ ma ọ bụ ịzụta site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi «System1» na mbido 2020, ulo oru nke bukwara onye nwe ugbu a search engine «mmalite» nye anyi ihe ojoo maka nkwenye gi zuru oke ma obu nke ìsì.
Ya mere, taa anyị ga-akwado Liberwolf, na kwa Librefox, iji dochie anya ma ọ bụ gbakwunye ojiji nke Firefox, ma ọ bụrụ na ịchọghị ịnwale ma ọ bụ jiri Mmiri Firefox.
Waterfox: Ezigbo ihe nchọgharị weebụ na-akwụghị ụgwọ, na-emeghe ma na-anọghị na ya
Maka ndị na-agụbeghị akụkọ anyị gara aga na Waterfox, n'okpuru ị nwere ike ịga leta ma gụọ ya. Agbanyeghị, ọ dị mma ịkọba ama ebe a, na otu ihe ahụ bụ:
"Ihe nchọgharị 64-bit dabere na ikpo okwu na-emeghe na oghere nke Mozilla. Na otu n’ime ihe nchọgharị 64-Bit mbụ e kesara na weebụ, nke nwetaworo ọtụtụ ndị na-eso ụzọ (ndị ọrụ) ngwa ngwa. Karịsịa, ebe ọ bụ na mbido ọ butere esemokwu nke ọsọ ọsọ, mana ugbu a, ọ na-agbalikwa ịbụ ihe nchọgharị gbasara ụkpụrụ na onye ọrụ.". Banyere Waterfox".
1 Nhọrọ ndị ọzọ na Firefox
Nhọrọ ndị ọzọ na Firefox
Na-ekwu banyere Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Librewolf, ọ na-akwalite dị ka:
"A ndụdụ nke Firefox, gbadoro anya na nzuzo, nchekwa na nnwere onwe ".
Na atụmatụ na arụmọrụ na-esonụ:
Enweghị telemetry: Napụta ezigbo ahụmahụ onye ọrụ na-enweghị adware, iwe ma ọ bụ ihe na-enweghị isi, dị ka nchegbu nke nsuso ma ọ bụ ịchọta site na telemetry.
Na nyocha nkeonwe: Site na ndị na-enye ọrụ a ma ama na mpaghara ahụ, dị ka DuckDuckGo, Startpage, Qwant na ndị ọzọ.
Ad blocker gụnyere: Gụnyere uBlock Mmalite na ndabara.
Nchedo abawanye: Ọ incorporates a Firewall ndọtị na ndị ọzọ na nche ndozi gụnyere, na-enweghị na-achụ àjà nchọgharị si usability.
Ndenye mmelite: Na-enye ntọala siri ike na nke oge a dabere na isi mmalite Firefox kachasị ọhụrụ, iji mee ka nchekwa na nkwụsi ike nke ihe nchọgharị ahụ nke ọma.
Meghee Isi mmalite: Isi mmalite ya na GitLab na Gitter na-enye ntụkwasị obi dị mkpa na nsonye nke ndị niile metụtara ya iji jigide ngwa dị mma na nke uzo.
Maka ama ndi ozo banyere Librewolf, ị nwekwara ike ịnweta ihe ndị a njikọ.
Na-ekwu banyere Weebụsaịtị Librefox, ọ na-akwalite dị ka:
"A ndụdụ nke Firefox na ndozi ndozi ".
Ihe kpatara: Librefox na-enye ndị ọrụ ya ike Chọọ n'enweghị ihe ọ bụla.
Ugbu a, oru ngo nke Librefox Aims ime izute nzuzo na Firefox na nchekwa na-enweghị forking oru ngo. Ya mere, kama ịbụ ndụdụ, Librefox ihe ọ na-enye bụ iji ihe karịrị 500 nzuzo / nche / arụmọrụ ntọala, patches, Librefox-Addons (nhọrọ) na a dị ọcha ngwugwu Firefoxya bụ enweghị ihe mmelite Firefox, ihe ngosi okuku, na ihe mgbakwunye etinyere na anaghị asọpụrụ nzuzo.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, Ejikọtaghị Librefox na Mozilla ma ọ bụ ngwaahịa ya.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Librefox, I nwekwara ike ịnweta ọkwa anyị gara aga banyere ya:
LibreFox, oru ngo iji melite nzuzo na Firefox
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Librewolf y Librefox», nke bụ 2 magburu onwe ya free na-emeghe ọzọ na dochie ma ọ bụ melite ojiji nke Firefox, na-enweghị gafere Mmiri Firefox, n’ihi ihe na-adịghị mma a kpọtụrụ aha ná mmalite; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Librewolf na Librefox: Nhọrọ ndị ọzọ na Firefox gafere Waterfox
Ma ma «Librewolf na Librefox» na-ewetakwa Startpage dị ka njin ọchụchọ na ọ bụ ihe nwute ịwụnye ma nwalee ya; enweghị faịlụ .DEB nke anyị na-amaghị etu esi achịkọta ma ọ bụ rụọ ọrụ Usoro Isi mmalite.
Daalụ, Gerson. Ihe na-akpali mmasị banyere Startpage. Agbanyeghị, ha nwere ya dị ka igwe nchọta ndabara mana ọ bụghị dị ka onye mmekọ ma ọ bụ onye enyemaka nke ọrụ ahụ, echere m. Ee ee, ọtụtụ ndị ọzọ na Firefox anaghị abịa n'ụdị nrụnye ahụ dị mma.
1. Debe folda Firefox gị yana profaịlụ onye ọrụ.
2. Download na dochie na folda Firefox:
Ọ bụrụ na ị kwenyeghi, tụfuo IceCat ka mma.
Mmasị Amaghị m na enwere ụzọ ndị ọzọ maka firefox.
Zaghachi na 4c656f
Ekele, 4c656f. Daalụ maka okwu gị. Ee, enwere ọtụtụ, dịka ọmụmaatụ IceCat ochie na Basilisk dị ugbu a.
Aga m anwale ya
Zaghachi Oscar Reyes
Ndo ma Telegram anaghị echekwa ma ọ bụ na nzuzo. O mechiri koodu na sava ahụ, ọ nweghịkwa ihe ga-akọ. Ngosipụta ga-abụ ezigbo nchekwa na nkeonwe, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, matriks ma ọ bụ onye ahịa XMPP, dị ka element.io ma ọ bụ mkparịta ụka.
Zaghachi Manuel Molina
Ihe mgbaàmà emelitere koodu sava ha na GitHub ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu afọ, o yighị ka ha ga-agba otu ụdị na sava ha dịka nke a na-ebipụta.
Eziokwu ahụ bụ na e mepụtara koodu maka ihe nkesa _un_ apụtaghị na ọ bụ koodu ejiri na sava ahụ n'onwe ya.
eme Ọnwa 9
waterfox na-akwado XUL ma na-enye ngwa maka ojiji dị mfe
librewolf na librefox adịghị enye ihe ọ bụla na enweghị m ike ịnwe na waterfox ma ọ bụ ọbụna firefox n'onwe ya
Zaghachi Hans Meier
Ekele, Hans Meier! Daalụ maka okwu gị na ntinye bara uru.
Eliot anderson dijo
Zaghachi Eliot anderson
Android 11 Go Edition bụ 20% ngwa ngwa ma ọ ga-agba ọsọ na-enweghị ihe karịrị 2GB ebule
Steamcompmgr, StumpWM, Sugar, SwayWM na TWM: WM ndị ọzọ maka Linux